पहिरो हटाइएपछि राप्ती राजमार्ग पाँच दिनपछि खुल्यो- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
असार ७, २०७८ विप्लव महर्जन
सल्यान — लगातारको वर्षाका कारण गएको पहिरोले अवरुद्ध बनेको राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत दाङ–सल्यान सडक पाँच दिनपछि खुलेको छ । प्रहरीको सक्रियतामा पहाडबाट खसेका पहिरो डोजर तथा स्काभेटरले पन्छाएपछि सञ्चालनमा आएको हो ।
पहिरोका कारण अवरुद्ध राप्ती राजमार्ग अन्तर्गतको दाङ–सल्यान सडक खण्डको कपुरकोट गाउँपालिका ३ दसरेमा पहिरो हटाउँदै डोजर । तस्बिर: विप्लव महर्जन/कान्तिपुर
कपुरकोट गाउँपालिका ३ दसरेमा गएको पहिरोले असार १ गतेदेखि सडक अवरुद्ध भएको थियो । सडक सञ्चालनमा आएपनि भारी वर्षा भए पुनः अवरुद्ध हुने सम्भावना यथावत रहेको बताइएको छ ।
पहिरो पन्छाएपछि शनिबार बेलुकीबाट सडक सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । सल्यानका डीएसपी गोविन्द थापाका अनुसार सडक अवरुद्ध हुन नदिका लागि डोजर तथा स्काभेटर पहिरो जाने क्षेत्रमा राखिएको छ । पहिरो खस्ने बित्तिकै डोजरले पन्छाउने उनले बताए ।
सडक अवरुद्ध हुँदा सल्यान, रुकुम , रोल्पाका सर्वसाधारण प्रभावित भएका थिए । पहिरोका कारण पुरिएका गाडीहरु पनि निकालिएको डीएसपी थापाले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : असार ७, २०७८ १४:४०
असार ७, २०७८ रासस
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले नमुना परीक्षणमा अणुवांशिक पहिचान गर्दा ४७ डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएकामध्ये नौ वटामा थप उत्परिवर्तन रुप के ४१७एन म्युटेसन देखिएको बताए । यसलाई एवाई.१ नाम दिइएको छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म अल्फा बी.१.१.७ र डेल्टा बी.१.६१७.२ तथा कप्पा बी.१.६१७.१ भेरियन्ट पुष्टि भएको छ । डेल्टाको उत्परिवर्तन भेरियन्ट बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिमा असर गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए । उनले यसअघि पनि नेपालमा देखिएको यो डेल्टा भेरियन्टको नयाँ रुप मात्र रहेको बताए । 'यो नयाँ देखिएको भेरियन्ट होइन', उनले भने, 'यसअघि पनि देखिएको छ, तर यो अन्यभन्दा बढी सङ्क्रामक रहेको छ ।'
मन्त्रालयले डेल्टा भेरियन्टको नयाँ रुपको संक्रमण रोक्नका लागि सबै सचेत र जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नका लागि अपिल गरेको छ ।
प्रकाशित : असार ७, २०७८ १४:३८